Ọnụ Ọgụgụ 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọnụ Ọgụgụ 9:1-23
9 Jehova wee gwa Mozis okwu n’ala ịkpa Saịnaị n’afọ nke abụọ mgbe ha pụtasịrị n’ala Ijipt, n’ọnwa nke mbụ,+ sị:
2 “Ụmụ Izrel ga-akwadebe àjà ememme ngabiga+ n’oge ya a kara aka.+
3 N’abalị iri na anọ n’ọnwa a, ná mgbede,+ ka unu ga-akwadebe ya n’oge ya a kara aka. Unu ga-akwadebe ya dị ka ụkpụrụ ya niile na usoro ya niile si dị.”+
4 Mozis wee gwa ụmụ Izrel ka ha kwadebe àjà ememme ngabiga.
5 Ha wee kwadebe àjà ememme ngabiga n’ala ịkpa Saịnaị n’ọnwa nke mbụ, n’abalị iri na anọ n’ọnwa ahụ, ná mgbede. Dị ka ihe niile Jehova nyere Mozis n’iwu si dị, otú ahụ ka ụmụ Izrel mere.+
6 Ma e nwere ndị ikom mkpụrụ obi+ nwụrụ anwụ mere ka ha bụrụ ndị na-adịghị ọcha, nke mere na ha enweghị ike ịkwadebe àjà ememme ngabiga n’ụbọchị ahụ. N’ihi ya, ha bịara n’ihu Mozis na Erọn n’ụbọchị ahụ.+
7 Ndị ikom ahụ wee sị ya: “Mkpụrụ obi nwụrụ anwụ mere ka anyị bụrụ ndị na-adịghị ọcha. Gịnị mere a ga-eji gbochie anyị iche onyinye+ anyị n’ihu Jehova n’oge ya a kara aka n’etiti ụmụ Izrel?”
8 Mozis wee sị ha: “Guzonụ ebe ahụ, ka m nụ ihe Jehova ga-enye n’iwu banyere unu.”+
9 Jehova wee gwa Mozis, sị:
10 “Gwa ụmụ Izrel, sị, ‘Ọ bụrụgodị na mkpụrụ obi+ emee ka nwoke ọ bụla n’ime unu ma ọ bụ n’ọgbọ unu bụrụ onye na-adịghị ọcha, ma ọ bụ ya agaa njem dị anya, onye ahụ kwa ga-akwadebe àjà ememme ngabiga a na-emere Jehova.
11 N’ọnwa nke abụọ,+ n’abalị iri na anọ, ná mgbede, ka ha ga-akwadebe ya. Ha ga-erikọta ya na achịcha na-ekoghị eko na akwụkwọ nri na-elu ilu.+
12 Ha agaghị ahapụ nke ọ bụla n’ime ya ruo ụtụtụ,+ ha agaghịkwa agbaji ọkpụkpụ ya ọ bụla.+ Ha ga-akwadebe ya dị ka ụkpụrụ dum nke ememme ngabiga si dị.+
13 Ma ọ bụrụ na nwoke ahụ dị ọcha ma ọ bụ na ọ gaghị njem ma ọ kwadebeghị àjà ememme ngabiga ahụ, a ga-ebipụ mkpụrụ obi ahụ n’etiti ndị ya,+ n’ihi na o wetaghị onyinye Jehova n’oge ya a kara aka. Nwoke ahụ ga-aza ajụjụ maka mmehie ya.+
14 “‘Ọ bụrụkwa na onye mbịarambịa bi n’etiti unu dị ka ọbịa, ya onwe ya kwa ga-akwadebe àjà ememme ngabiga a na-emere Jehova.+ Dị ka ụkpụrụ ememme ngabiga na usoro ya si dị ka ọ ga-eme ya.+ Otu ụkpụrụ ga-adịrị unu, ọ ga-adịrị ma onye mbịarambịa ma nwa afọ ala unu.’”+
15 N’ụbọchị e wuru ụlọikwuu ahụ,+ ígwé ojii kpuchiri ụlọikwuu ahụ, ya bụ, ụlọikwuu Ihe Àmà,+ ma n’anyasị ihe yiri ọkụ+ na-akwụrụ n’elu ụlọikwuu ahụ ruo ụtụtụ.
16 Otú ahụ ka ọ na-adị mgbe niile: Ígwé ojii na-ekpuchi ya n’ehihie, ihe yiri ọkụ ekpuchiekwa ya n’abalị.+
17 Mgbe ọ bụla ígwé ojii ahụ si n’elu ụlọikwuu ahụ kwụlie, ụmụ Izrel na-akwali ozugbo.+ N’ebe ígwé ojii ahụ kwụsịrị, n’ebe ahụ ka ụmụ Izrel na-ama ụlọikwuu.+
18 Ụmụ Izrel na-akwali mgbe Jehova nyere iwu ka ha kwalie, ha na-amakwa ụlọikwuu mgbe Jehova nyere iwu ka ha maa ụlọikwuu.+ N’ụbọchị niile ígwé ojii kwụ n’elu ụlọikwuu ahụ, ha na-anọ n’ebe ahụ ha mara ụlọikwuu.
19 Mgbe ígwé ojii ahụ kwụ n’elu ụlọikwuu ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị, ụmụ Izrel na-erube isi n’iwu Jehova wee ghara ịkwali.+
20 Mgbe ụfọdụ, ígwé ojii ahụ na-akwụrụ n’elu ụlọikwuu ahụ ụbọchị ole na ole. Ha na-anọ n’ebe ha mara ụlọikwuu mgbe Jehova nyere iwu+ ka ha nọrọ, ha na-akwalikwa mgbe Jehova nyere iwu ka ha kwalie.
21 Mgbe ụfọdụ, ígwé ojii+ ahụ na-adịgide malite n’anyasị ruo n’ụtụtụ; ígwé ojii ahụ na-akwụli n’ụtụtụ, ha ewee kwalie. Ma ọ̀ bụ n’ehihie ma ọ bụ n’abalị ka ígwé ojii ahụ kwụliri, ha na-akwali.+
22 Ma ọ̀ bụ ụbọchị abụọ ma ọ bụ otu ọnwa ma ọ bụ karị ka ígwé ojii ahụ kwụ n’elu ụlọikwuu ahụ, ụmụ Izrel na-anọ n’ebe ha mara ụlọikwuu, ha adịghị akwali, ma mgbe ọ kwụliri, ha na-akwali.+
23 Ha na-ama ụlọikwuu mgbe Jehova nyere iwu ka ha maa ụlọikwuu, ha na-akwalikwa mgbe Jehova nyere iwu ka ha kwalie. Ha na-erubere Jehova isi+ mgbe Jehova nyere iwu site n’ọnụ Mozis.+
Ọnụ Ọgụgụ 9